Nkwa nke Chineke - www.yomelijah.com
Ahịrịokwu ahụ na-acha anụnụ anụnụ (n'etiti paragraf abụọ), na-enye gị nkọwa ndị ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ, pịa na ya. Edere isiokwu ndị dị na Akwụkwọ Nsọ n'asụsụ anọ: Bekee, Spanish, Portuguese na French. Ọ bụrụ na a ga-ede ya n'asụsụ Igbo, a ga-akọwapụta ya n'etiti brackets
"M ga-emekwa ka iro dịrị n’etiti gị na nwaanyị ahụ nakwa n’etiti mkpụrụ gị na mkpụrụ ya. Ọ ga-egwepịa gị isi, ị ga-emerụkwa ya ahụ́ n’ikiri ụkwụ"
Biko pịa na njikọta iji lelee edemede ahụ
“Enwekwara m atụrụ ọzọ, ndị na-anọghị n’ogige atụrụ a. M ga-akpọtakwa ha, ha ga-ege m ntị. Ha ga-aghọ otu ìgwè atụrụ, nweekwa otu onye ọzụzụ atụrụ"
Iji nlezianya gụọ Jọn 10:1-16 na-ekpughe na isiokwu bụ́ isi bụ ịmata Mezaịa ahụ dị ka ezi onye ọzụzụ atụrụ nke ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ atụrụ.
Na Jọn 10:1 na Jọn 10:16, e dere, sị: “N’eziokwu, ana m asị unu na ọ bụrụ na mmadụ anaghị esi n’ọnụ ụzọ abanye n’ogige atụrụ, kama na-esi ebe ọzọ arịba, ọ bụ onye ohi na onye na-apụnara mmadụ ihe. (...) Enwekwara m atụrụ ọzọ, ndị na-anọghị n’ogige atụrụ a. M ga-akpọtakwa ha, ha ga-ege m ntị. Ha ga-aghọ otu ìgwè atụrụ, nweekwa otu onye ọzụzụ atụrụ". “Mkpịsị atụrụ” a na-anọchi anya ókèala ebe Jizọs Kraịst kwusara ozi ọma, bụ́ Mba Izrel, n’ihe banyere iwu Mozis: “Jizọs zipụrụ mmadụ iri na abụọ a ma sị ha: “Unu abanyela n’okporo ụzọ ndị mba ọzọ, unu abanyekwala n’obodo ndị Sameria. Kama, na-agakwurunụ atụrụ furu efu bụ́ mba Izrel"” (Matiu 10:5, 6). “O wee, sị: “E zitere m maka atụrụ furu efu, bụ́ mba Izrel, ọ bụghị maka ndị ọ bụla ọzọ"” (Matiu 15:24).
Na Jọn 10:1-6 e dere na Jizọs Kraịst pụtara n’ihu ọnụ ụzọ nke ogige atụrụ ahụ. Nke a mere n’oge e mere ya baptizim. “Onye nche ọnụ ụzọ” bụ Jọn Baptist (Matiu 3:13). Site n’ime Jizọs baptizim, onye ghọrọ Kraịst, Jọn Baptist meghere ya ụzọ ma gbaa akaebe na Jizọs bụ Kraịst na Nwa atụrụ Chineke: “N’echi ya, ọ hụrụ Jizọs ka ọ na-abịakwute ya, o wee sị: “Lee Nwa Atụrụ Chineke onye na-ewepụ mmehie+ nke ụwa"" (Jọn 1:29-36).
Na Jọn 10:7-15, ka Jizọs Kraịst nọkwa n’otu isiokwu Mesaịa ahụ, o ji ihe atụ ọzọ mee ihe site n’ịkpọ onwe ya dị ka “Ọnụ Ụzọ Ámá” ahụ, bụ́ nanị ebe e si abanye n’otu ụzọ ahụ Jọn 14:6: “Jizọs sịrị ya: “Ọ bụ m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. E nweghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụrụ na o sighị na m"".
Isi isiokwu nke isiokwu a bụ mgbe niile Jizọs Kraịst dị ka Mezaịa. Site n’amaokwu nke 9, n’otu akụkụ (ọ gbanwere ihe atụ ahụ n’oge ọzọ), ọ kpọrọ onwe ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ nke na-azụ atụrụ ya site n’ime ka ha ‘ba ma ọ bụ pụta’ ka ha zụọ ha. Ozizi ahụ gbakwasara n’ebe ọ nọ nakwa n’ụzọ o si elekọta atụrụ ya. Jizọs Kraịst kpọrọ onwe ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ magburu onwe ya nke ga-atọgbọ ndụ ya maka ndị na-eso ụzọ ya na onye hụrụ atụrụ ya n'anya (n'adịghị ka onye ọzụzụ atụrụ na-akwụ ụgwọ nke na-agaghị etinye ndụ ya n'ihe ize ndụ n'ihi atụrụ na-abụghị nke ya). Ọzọ, ihe nkuzi nke Kraịst lekwasịrị anya bụ n’onwe ya dịka onye ọzụzụ atụrụ nke ga-achụ onwe ya n’àjà maka atụrụ ya (Matiu 20:28).
Jọn 10:16-18: “Enwekwara m atụrụ ọzọ, ndị na-anọghị n’ogige atụrụ a. M ga-akpọtakwa ha, ha ga-ege m ntị. Ha ga-aghọ otu ìgwè atụrụ, nweekwa otu onye ọzụzụ atụrụ. Nna m hụrụ m n’anya maka na m na-enye ndụ m ka m wee nweta ya ọzọ. O nweghị onye na-anapụ m ndụ m, kama ọ bụ m ji aka m enyefe ya. Enwere m ikike inyefe ya, enwekwara m ikike inweta ya ọzọ. Ọ bụ Nna m nyere m iwu a”.
Site n’ịgụ amaokwu ndị a, n’iburu n’uche ihe ndị gbara n’amaokwu ndị bu ụzọ pụta ìhè, Jisọs Kraịst mara ọkwa mgbanwe n’oge ahụ, na ọ ga-achụ ndụ ya n’àjà ọ bụghị nanị n’ihi ndị na-eso ụzọ ya ndị Juu, kamakwa maka ndị na-abụghị ndị Juu. Ihe àmà bụ na iwu ikpeazụ o nyere ndị na-eso ụzọ ya, banyere ime nkwusa, bụ nke a: “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu. Unu ga-abụkwa ndị àmà m ma na Jeruselem ma na Judia na Sameria, ruokwa n’ebe kacha anya n’ụwa” ( Ọrụ Ndịozi 1:8). Ọ bụ kpọmkwem na baptizim nke Kọnịliọs ka okwu nile nke Kraịst na Jọn 10:16 ga-amalite imezu (Lee akụkọ ndekọta akụkọ nke Ọrụ Ndịozi isi 10).
N’ihi ya, “atụrụ ọzọ” ahụ dị na Jọn 10:16 metụtara Ndị Kraịst na-abụghị ndị Juu n’anụ ahụ́. Na Jọn 10:16–18, ọ na-akọwa ịdị n’otu dị n’irube isi nke atụrụ ahụ nye Onye Ọzụzụ Atụrụ ahụ. O kwukwara banyere ndị na-eso ụzọ ya nile n’oge ya dị ka “ìgwè atụrụ nta”: “Ìgwè atụrụ nta, unu atụla egwu, n’ihi na ọ dị Nna unu mma inye unu Alaeze” (Luk 12:32). Na Pentikọst nke afọ 33, ndị na-eso ụzọ Kraịst dị nanị otu narị na iri abụọ (Ọrụ 1:15). N’aga n’ihu nke akụkọ nke Ọrụ Ndịozi, anyị nwere ike ịgụ na ọnụ ọgụgụ ha ga-eru puku ole na ole (Ọrụ 2:41 (mkpụrụ obi 3000); Ọrụ 4: 4 (5000)). Ka o sina dị, Ndị Kraịst ọhụrụ ahụ, ma ọ̀ bụ n’oge Kraịst, dị ka ọ dị n’oge ndịozi, nọchiri anya “ìgwè atụrụ nta” n’ihe banyere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ n’ozuzu nke mba Izrel nakwa ná mba ndị ọzọ n’oge ahụ oge.
Ka anyị dịrị n’otu dị ka Kraịst jụrụ Nna ya
"M na-arịọ arịrịọ, ọ bụghị naanị maka ndị a, kamakwa maka ndị ga-enwe okwukwe na m n’ihi okwu ha, ka ha niile wee bụrụ otu otú ahụ gịnwa, Nna, na mụnwa dị n’otu, mụ na gị adịrịkwa n’otu, ka anyị na ha wee dị n’otu, ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m" (Jọn 17:20, 21).
Gịnị bụ ozi ilu ilu amụma a? Jehova Chineke na-eme ka amata na atụmatụ ya imejupụta ala nke mmadụ dị nnọọ ezi ga-emezu (Jenesis 1: 26-28). Chineke ga-azoputa nkpuru Adam site na nkpuru “nwanyi nke nwanyi” (Jenesis 3:15). Amụma a abụrụla “ihe nzuzo dị nsọ” kemgbe ọtụtụ narị afọ (Mak 4:11; Ndị Rom 11:25; 16:25; 1 Ndị Kọrịnt 2: 1,7 "ihe nzuzo dị nsọ"). Jehova Chineke kpughere ya nke nta nke nta ọtụtụ narị afọ. Nke a bụ ihe ilu ilu amụma a pụtara:
(Jizọs Kraịst bụ eze nke alaeze nke alaeze Chineke, nke Nna ya, Jehova Chineke guzobere, na 1914 (dị ka usoro ọgụgụ akwụkwọ nsọ nke amụma Daniel isi 4 si dị))
(Naanị mmadụ 144,000 (ndị nwoke na ndị nwanyị), ga-enwe mbilite n’ọnwụ nke eluigwe ma soro Eze nke Jizọs Kraịst chịa n’eluigwe, dị ka amụma nke Mkpughe isi 5,7 na 14)
Nwaanyị: ọ na-anọchite anya ndị Chineke nke eluigwe, nke ndị mmụọ ozi mejupụtara n’eluigwe: “E wee hụ oké ihe ịrịba ama n’eluigwe, ya bụ, otu nwaanyị nke yi anyanwụ dị ka uwe, ọnwa dịkwa n’okpuru ụkwụ ya, o kpukwa okpueze nke bụ́ kpakpando iri na abụọ n’isi ya” (Nkpughe 12:1). A kọwara nwanyị a dịka “Jerusalem nke sitere n’elu”: “Ma Jeruselem nke dị n’elu nweere onwe ya, ọ bụkwa nne anyị” (Ndị Galeshia 4:26). Akowara ya dika “Jeruselem nke eluigwe”: “Ma unu abịaruwo nso n’Ugwu Zayọn nakwa obodo nke Chineke dị ndụ, bụ́ Jeruselem nke eluigwe, na ọtụtụ iri puku ndị mmụọ ozi” (Ndi Hibru 12:22). Ruo ọtụtụ puku afọ, dị ka Sera, nwunye Abraham, nwanyị a nke eluigwe bụ nwanyị aga (Jenesis 3:15): “Tie mkpu ọṅụ, gị nwaanyị aga nke na-amụghị nwa! Nwee obi ụtọ, tiekwa mkpu ọṅụ, tisie mkpu ike, gị onye ime na-emeghị, n’ihi na ụmụ nke nwaanyị a gbahapụrụ agbahapụ dị ọtụtụ karịa ụmụ nke nwaanyị nwere di,” ka Jehova kwuru" (Aịzaya 54:1). Amụma a kwupụtara na nwanyị nke nọ n’eluigwe ga-amụ ọtụtụ ụmụ (Eze Jizọs Kraịst na ndị eze na ndị nchụàjà otu narị puku na puku iri anọ na puku).
Mkpụrụ nwanyị a: Akwụkwọ Mkpughe na-ekpughe onye nwa nwoke a bụ: “E wee hụ oké ihe ịrịba ama n’eluigwe, ya bụ, otu nwaanyị nke yi anyanwụ dị ka uwe, ọnwa dịkwa n’okpuru ụkwụ ya, o kpukwa okpueze nke bụ́ kpakpando iri na abụọ n’isi ya. Nwaanyị ahụ dị ime. O wee na-eti mkpu n’ihi ihe mgbu ọ na-enwe na oké ihe ụfụ ọ na-enwe ịmụpụta nwa. (...) O wee mụọ ọkpara, bụ́ nwa nwoke, onye ga-eji mkpanaka ígwè zụọ mba niile dị ka atụrụ. E kukwaara nwa ya gaa n’ebe Chineke nọ nakwa n’ebe ocheeze ya dị” (Nkpughe 12:1,2,5). Nwa nwoke a bụ Jizọs Kraịst, dịka eze nke alaeze nke Chineke: “Onye a ga-abụ onye ukwu, a ga-akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu; Jehova Chineke ga-enyekwa ya ocheeze Devid bụ́ nna ya, ọ ga-achịkwa ụlọ Jekọb dị ka eze ruo mgbe ebighị ebi, alaeze ya agaghịkwa enwe ọgwụgwụ” (Luk 1:32,33, Abuoma 2).
Agwọ ochie ahụ bụ Setan: “E wee chụda dragọn ukwu ahụ, bụ́ agwọ mbụ ahụ, onye a na-akpọ Ekwensu na Setan, onye na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi; a chụdara ya n’ụwa, a chụdara ya na ndị mmụọ ozi ya” (Nkpughe 12:9).
(A chụpụrụ Setan bụ́ ekwensu n’eluigwe, n’afọ 1914)
“Mkpụrụ ahụ ekwensu” bụ ndị iro nke, ndị na-agbasi mgba ike megide ọbụbụeze Chineke, na Eze nke Jizọs Kraịst na ndị nsọ nọ n’ụwa: “Agwọ, ụmụ ajụala, olee otú unu ga-esi gbanahụ ikpe Gehena? N’ihi nke a, lee, m na-ezitere unu ndị amụma na ndị maara ihe na ndị na-ezi ihe n’ihu ọha. Ụfọdụ n’ime ha ka unu ga-egbu, kpọgidekwa ha n’osisi, ụfọdụ n’ime ha ka unu ga-apịakwa ihe n’ụlọ nzukọ unu, kpagbuokwa ha site n’obodo ruo n’obodo; ka ọbara ezi omume dum a wụfuru n’ụwa wee dị n’isi unu, malite n’ọbara onye ezi omume bụ́ Ebel ruo n’ọbara Zekaraya nwa Barakaya, onye unu gburu n’agbata ebe nsọ na ebe ịchụàjà” (Matiu 23:33-35).
(Ọtụtụ n’ime ụmụ nke ekwensu ga-apụ n’anya n’oge oke mkpagbu ahụ dịka Mkpughe 14 na 19)
Ihe ọnya ahụ n’ikiri ụkwụ nwanyị ahụ bụ ọnwụ nke Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst: “Mgbe ọ hụrụ onwe ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ee, ọnwụ n’osisi ịta ahụhụ” (Ndị Filipaị 2:8). Na agbanyeghị, a gwọchara mmerụ ikiri ụkwụ a site na mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst: “ma unu gburu Onye Nnọchiteanya Ukwu nke ndụ. Ma Chineke si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite ya, bụ́ eziokwu nke anyị bụ ndị àmà ya” (Ọlụ Ndịozi 3:15).
(Àjà Kraịst chụrụ mere ka nzọpụta nke mmadụ pụta ìhè (Jọn 3:16))
(Anyị ga na-echeta ọnwụ Jizọs Kraịst kwa afọ (nke e dere n’asụsụ Igbo))
Ma ag crushedtipia isi ag] ah ah bu mbibi ebigh ofebi nke Setan na ndi iro nke uwa nke Alaeze Chineke: “Chineke nke na-enye udo ga-azọpịa Setan n’okpuru ụkwụ unu n’oge na-adịghị anya” (Ndi Rom 16:20). "A tụbakwara Ekwensu, bụ́ onye na-eduhie ha, n’ime ọdọ ọkụ na sọlfọ ahụ, bụ́ ebe ma anụ ọhịa ahụ ma onye amụma ụgha ahụ nọ anọ; a ga-emekpakwa ha ahụ́ ehihie na abalị ruo mgbe niile ebighị ebi" (Mkpughe 20:10).
1 - Chineke na Abraham gbara ndụ
"Ọ bụkwa site ná mkpụrụ gị ka mba niile nke ụwa ga-agọzi onwe ha n’ihi na i gewo ntị n’olu m"
Ọgbụgba ndụ Abraham bụ nkwa na mmadụ niile na-erubere Chineke isi, ga-agọzi ụmụ ụmụ Ebreham. Abraham nwere nwa nwoke, Aisak, ya na nwunye ya Sera (rue ogologo oge nwa n’enweghi nwa) (Jenesis 17:19). Abraham, Sera na Aịsak bụ ihe ndị pụtara ìhè na ihe nkiri amụma nke na-anọchi anya, n'otu oge ahụ, ihe nzuzo dị nsọ na ụzọ Chineke ga-esi zọpụta ụmụ mmadụ na-erube isi (Jenesis 3:15).
- Jehova Chineke na - anọchite anya onye Abraham: "N’ihi na ị bụ Nna anyị; ọ bụ ezie na o nwere ike ịbụ na Ebreham amaghị anyị, o nwekwara ike ịbụ na Izrel amaghị anyị, gị onwe gị, Jehova, bụ Nna anyị. Onye Mgbapụta anyị kemgbe oge dị anya gara aga bụ aha gị” (Aịzaya 63:16; Luk 16:22).
(Jehova bụ aha Chineke)
(Anyị ga na-efe naanị ofufe Jehova (Matiu 22:37, 38)
- Nwanyi nke elu igwe bu Sera di uku, n’enweghi nwa (Nkpuru nke Jenesis 3:15): “N’ihi na e dere, sị: “Nwee ọṅụ, gị nwaanyị aga nke na-adịghị amụ nwa; tie mkpu ọṅụ, tisie ya ike, gị nwaanyị nke ime na-adịghị eme; n’ihi na ụmụ nke nwaanyị a gbahapụrụ agbahapụ dị ọtụtụ karịa ụmụ nke nwaanyị nwere di.” Ma ụmụnna m, anyị bụ ụmụ dịịrị nkwa ahụ dị ka Aịzik bụkwa. Ma dị nnọọ ka ọ dị mgbe ahụ, nke ahụ a mụrụ n’ụzọ anụ ahụ́ malitere ịkpagbu nke ahụ a mụrụ n’ụzọ mmụọ nsọ, otú ahụ ka ọ dịkwa ugbu a. Otú o sina dị, gịnị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru? “Chụpụ nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi na nwa ya, n’ihi na nwa nke nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi agaghị eso nwa nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya bụrụ onye nketa ma ọlị.” Ya mere, ụmụnna m, anyị bụ ụmụ nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya, anyị abụghị ụmụ nke nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi” (Ndị Galeshia 4:27-31).
- Jisos Kraist bu onye Aisak uku ahu, onye isi nkpuru Abraham: “Ma, ọ bụ Ebreham na mkpụrụ ya ka e kwere nkwa ndị ahụ. Ihe o kwuru abụghị: “Na mkpụrụ dị iche iche,” dị ka ọ̀ na-ekwu banyere ọtụtụ mkpụrụ, kama dị ka à ga-asị na ọ na-ekwu banyere otu onye, ọ sịrị: “Na mkpụrụ gị,” nke bụ́ Kraịst” (Ndi Galeshia 3:16).
(Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Jehova Chineke, nanị ụzọ maka nzọpụta ebighi ebi (Jọn 14: 6))
- Ihe ọnya ahụ n’ikiri ụkwụ nwanyị: Jehova gwara Abraham ka o chuara Aisak nwa ya nwoke. Abraham ajụghị (n'ihi na o chere na Chineke ga-akpọlite ​​Aịsak mgbe ịchụ-aja a gasịrị (Ndị Hibru 11: 17-19)). Nwa obere oge tupu a chụọ àjà, Chineke gbochiri Abraham ime ụdị omume ahụ. Ejiri ebule dochie Aisak: "O wee ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na ezi Chineke lere Ebreham ule. O wee kpọọ ya, sị: “Ebreham!” o wee zaa, sị: “Lee m!” O wee sị ya: “Biko, kpọrọ nwa gị nwoke, nwa ị mụrụ naanị ya, onye ị hụrụ n’anya nke ukwuu, bụ́ Aịzik, gaa n’ala Moraya, nọrọkwa n’ebe ahụ chụọ ya dị ka àjà nsure ọkụ n’otu n’ime ugwu m ga-akpọrọ gị aha.” (...) N’ikpeazụ, ha rutere n’ebe ahụ ezi Chineke kpọọrọ ya aha, Ebreham wee wuo ebe ịchụàjà n’ebe ahụ ma doo nkụ ahụ n’usoro, keekwa Aịzik ụkwụ na aka tụkwasị ya n’elu ebe ịchụàjà ahụ, n’elu nkụ ahụ. Mgbe ahụ, Ebreham matịrị aka were mma ahụ e ji egbu anụ ka o gbuo nwa ya. Ma mmụọ ozi Jehova malitere ịkpọ ya òkù site n’eluigwe, sị: “Ebreham, Ebreham!” o wee zaa, sị: “Lee m!” O wee gaa n’ihu ịsị: “Esetịla aka gị mee nwa okoro ahụ ihe, emekwala ya ihe ọ bụla ma ọlị, n’ihi na ugbu a ka m matara na ị na-atụ egwu Chineke n’ihi na ị jụghị inye m nwa gị nke ị mụrụ naanị ya.” Ebreham wee lelie anya, ma, lee, n’ihu ihu, e nwere ebule nke mpi ya konyere n’osisi. Ebreham wee gaa kpụrụ ebule ahụ ma chụọ ya dị ka àjà nsure ọkụ n’ọnọdụ nwa ya nwoke. Ebreham wee malite ịkpọ ebe ahụ Jehova-jaịre. Ọ bụ ya mere e ji ekwu taa, sị: “Jehova ga-enye ihe dị mkpa n’ugwu ya” (Jenesis 22:1-14). Jehova chụrụ aja a, Ọkpara ya Jizọs Kraịst. Lhe nnọchi anya amụma a na-egosi na àjà a mere ka Chineke taa ahụhụ (gụọ mkpụrụokwu ahụ "nwa nwoke ị hụrụ n'anya nke ukwuu"). Jehova Chineke, onye nnukwu Abraham, chụrụ nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya Jizọs Kraịst, nnukwu Aịsak maka nzọpụta nke ndi mmadu: “N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. (...) Onye nwere okwukwe n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; onye na-enupụrụ Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ, kama ọnụma Chineke na-adịgide n’ahụ́ ya” (Jon 3:16,36). Mmezu ikpe azu nke nkwa ekwere Abraham ga-emezu site na ngozi ebighebi nke ndi mmadu rubere isi. : "M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ na-asị: “Lee! Ụlọikwuu nke Chineke dịnyeere mmadụ, ya na ha ga-ebikwa, ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo” (Nkpughe 21:3,4).
(Nhapụ nke ọrịa, ịka nká na ọnwụ)
2 - Ọgbụgba ndụ ibi úgwù
"O nyekwara ya ọgbụgba ndụ nke ibi úgwù; o sikwa otú ahụ ghọọ nna Aịzik, biekwa ya úgwù n’ụbọchị nke asatọ, Aịzik aghọọkwa nna Jekọb, Jekọb aghọọkwa nna nke ndị isi ezinụlọ iri na abụọ ahụ"
Ọgbụgba ndụ ibi úgwù ga-abụ ihe e ji mara ndị Chineke, n'oge ahụ Israel nke dị n'ụwa. Lhe ọ pụtara nke ibi úgwù, Moses kọwara ya: "Biekwanụ obi unu úgwù, unu ekwesikwala olu ike ọzọ" (Deuterọnọmi 10: 16). Ibi úgwù pụtara n'ihe kwekọrọ n'obi ihe atụ, ebe ọ bụ ya bụ isi iyi ndụ, irubere Chineke isi: “Karịa ihe niile ọzọ a ga-eche nche, chebe obi gị, n’ihi na ọ bụ na ya ka isi iyi nke ndụ si apụta” (Ilu 4:23).
(Nrube isi nye Chineke na Ọkpara Ya Jisos Kraist, site na ezigbo ihe omuma nke uche ha, nke edere ke Bible (Abu oma 1: 2,3) (nke e dere n’asụsụ Igbo))
(Irubere Chineke na Ọkpara Ya Jizọs Kraịst isi, ruo ntozu okè ime mmụọ)
Stivin ghọtara nkuzi a bụ isi. Ọ gwara ndị na-ege ya ntị bụ́ ndị na-enweghị okwukwe na Jizọs Kraịst, n’agbanyeghị na e biri ha úgwù n’ụzọ anụ ahụ́, ha bụ ndị a na-ebighị úgwù n’obi nke obi na ntị: "Ndị na-ekwesi olu ike na ndị a na-ebighị úgwù n’obi na ná ntị, unu na-eguzogide mmụọ nsọ mgbe niile; dị ka nna nna unu hà mere, otú ahụ ka unu na-eme. Ònye n’ime ndị amụma ka nna nna unu hà na-akpagbughị? Ee, ha gburu ndị mara ọkwa tupu oge eruo banyere ọbịbịa nke Onye ezi omume ahụ, bụ́ onye unu ghọworo ugbu a ndị raara ya nye na ndị gburu ya. Unu Ndị natara Iwu ahụ dị ka ndị mmụọ ozi si nye ya ma unu edebeghị ya” (Olu 7:51-53). Egburu ya, nke a bụ nkwenye na ndị ogbu ọchụ ndị a bụ ndị a na-ebighị úgwù nke mmụọ.
(“Bụghị úgwù ime mmụọ" bu nnupu isi nke Chineke na Okpara ya bu Jisos Kraist (lee akuku nke 2) (nke e dere n’asụsụ Igbo))
Obi ime mmụọ bu mejuputara ime ime onye, ​​nke ebum n’uche tinyere okwu na omume (odi nma ma obu ihe ojo). Jizọs Kraịst akọwaala nke ọma ihe na-eme ka mmadụ dị ọcha ma ọ bụ adịghị ọcha, n’ihi ọnọdụ obi ya: “Otú ọ dị, ihe ndị na-esi n’ọnụ apụta na-esi n’obi, ọ bụ ihe ndị ahụ na-emerụ mmadụ. Dị ka ihe atụ, n’obi ka echiche ọjọọ, igbu ọchụ, ịkwa iko nke di ma ọ bụ nwunye, ịkwa iko, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, nkwulu, si apụta. Ọ bụ ihe ndị a na-emerụ mmadụ; ma iji aka a na-akwọghị akwọ rie nri adịghị emerụ mmadụ” (Matiu 15:18-20). Jesus Christ na-akọwa mmadụ n'ime ọnọdụ nke ebibeghị ya úgwù nke mmụọ, ya na echiche ya juputara, nke neme ka o ghara idi ocha na adighi nma maka ndu (lee Ilu 4:23). “Ezi mmadụ na-esi n’ezi akụ̀ ya ewepụta ihe ọma, ebe ajọ mmadụ na-esi n’ajọ akụ̀ ya ewepụta ihe ọjọọ” (Matiu 12:35). Na akụkụ mbụ nke nkwupụta Jizọs Kraịst, ọ kọwara mmadụ nke nwere obi ibi úgwù.
Onyeozi Paul ghọtakwara nkuzi a site n'aka Mosis, ma kwa site na Jizọs Kraịst. Ibi úgwù ime mmụọ bụ irubere Chineke isi ma nwa ya na Jizọs Kraịst: "N’eziokwu, ibi úgwù bara uru naanị ma ọ bụrụ na ị na-edebe iwu; ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-emebi iwu, úgwù e biri gị aghọwo ebighị úgwù. Ya mere, ọ bụrụ na onye a na-ebighị úgwù na-eme ihe ziri ezi ndị dị n’Iwu ahụ, ọ̀ bụ na a gaghị agụ ebighị úgwù ya dị ka ibi úgwù? Onye bụkwa onye a na-ebighị úgwù site n’ọmụmụ, site n’idebe Iwu ahụ, ga-ekpe gị ikpe, gị onye na-emebi iwu n’agbanyeghị na i nwere iwu e dere ede, bụrụkwa onye e biri úgwù.N’ihi na ọ bụghị onye bụ́ onye Juu n’elu ahụ́ bụ onye Juu, ọ bụghịkwa úgwù e biri n’elu ahụ́ bụ ibi úgwù. Kama, ọ bụ onye bụ́ onye Juu n’obi bụ onye Juu, úgwù e biri ya bụkwa n’obi site na mmụọ, ọ bụghị site n’iwu e dere ede. Otuto onye ahụ na-abịa, ọ bụghị site n’aka mmadụ, kama site n’aka Chineke” (Ndi Rom 2:25-29).
Onye Kraịst ahụ “kwesịrị ntụkwasị obi” anọghịzi n'okpuru Iwu enyere Mozis, n'ihi ya kwa, iwu ejighị ya ka ọ bie ya úgwù, dịka iwu nke ndịozi dere n'akwụkwọ Ọrụ 15: 19,20,28,29. Egosipụtara nke a site na ihe mmụọ nsọ dere, nke Onyeozi Pọl: "N’ihi na Kraịst bụ njedebe Iwu ahụ, ka onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya wee nwee ezi omume" (Ndị Rom 10: 4). “Ọ̀ dị onye a kpọrọ mgbe e biworo ya úgwù? Ya aghọla onye a na-ebighị úgwù. Ọ̀ dị onye a kpọrọ mgbe a na-ebibeghị ya úgwù? Ya ekwela ka e bie ya úgwù. Ibi úgwù apụtaghị ihe ọ bụla, ebighị úgwù apụtaghịkwa ihe ọ bụla, kama ọ bụ ime ihe Chineke nyere n’iwu nwere ihe ọ pụtara” (1 Ndị Kọrịnt 7:18,19). Site ugbu a, OnyeKraist aghaghi ibi úgwù nke mmụọ, ya bụ, irubere Jehova Chineke isi ma nwee okwukwe n'àjà Kraịst (Jọn 3: 16,36).
(Anyị anọghị n'okpuru ikike nke iwu enyere Moses, ma iwu a nwere uru amụma nke mezuru n'ime Kraịst, n'ọgbakọ Ndị Kraịst, ọ ga-emezu na paradaịs elu ụwa dị n'ihu, dị ka Ndị Hibru 10: 1, Ndị Kọlọsi 2:17 na Ezikiel 40-48)
A ga-ebirị onye ọ bụla chọrọ isonye na Ngabiga úgwù. Ugbu a, onye Kristian (ihe ọ bụla olile anya ya (nke elu igwe ma ọ bụ nke ụwa)), ga-enwerịrị ibi úgwù nke mmụọ tupu ya eri achịcha na-ekoghị eko ma drinkụọ iko ahụ, na-echeta ọnwụ Jizọs Kraịst: "Ka mmadụ buru ụzọ nwapụta onwe ya mgbe o nyochasịrị onwe ya, mgbe o mere otú ahụ, ya taa achịcha ahụ ma ṅụọ iko ahụ” (1 Ndị Kọrịnt 11:28 ma e jiri ya tụnyere Ọpụpụ 12:48 (Ememme Ngabiga)).
(Anyị ga-echeta ọnwụ Jizọs Kraịst kwa afọ. Ndị Kraịst niile kwesịrị ntụkwasị obi, (n'agbanyeghị olileanya ya (nke elu igwe ma ọ bụ nke ụwa)), ga-esonye na nnọchianya ndị ahụ, dị ka Jọn 6: 48-58 (nke e dere n’asụsụ Igbo))
3 - Ọgbụgba ndụ nke iwu dị n'etiti Chineke na ụmụ Israel
“Lezienụ anya ka unu ghara ichefu ọgbụgba ndụ Jehova bụ́ Chineke unu, nke unu na ya gbara, ka unu gharakwa imere onwe unu ihe oyiyi a pịrị apị, ọdịdị nke ihe ọ bụla Jehova bụ́ Chineke gị nyere gị iwu banyere ya”
Onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ a bụ Mozis: “Ọ bụkwa m ka Jehova nyere iwu n’oge ahụ ka m kụziere unu ụkpụrụ na mkpebi ikpe, ka unu wee na-edebe ha n’ala ahụ unu na-agafe inweta” (Deuterọnọmi 4:14). Ọgbụgba ndụ a na ọgbụgba ndụ ibi úgwù nwere njikọ chiri anya, nke bụ ihe nnọchianya nke irubere Chineke isi (Deuterọnọmi 10:16 ma atụnyere Ndị Rom 2: 25-29). Ọgbụgba-ndụ a ga-agwụ mgbe ọbịbịa nke Mesaịa ga-abịarute: “Ọ ga-eme ka ọgbụgba ndụ dịrị irè maka ọtụtụ ndị ruo otu izu; n’ọkara izu ahụ, ọ ga-eme ka àjà na onyinye inweta ihu ọma kwụsị” (Daniel 9:27). A ga-eji ọgbụgba ndụ ọhụrụ dochie ọgbụgba ndụ a, dị ka amụma Jeremaya kwuru si: “Lee! Oge na-abịa,” ka Jehova kwuru, ‘mgbe mụ na ụlọ Izrel na ụlọ Juda ga-agba ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị ụdị ọgbụgba ndụ ahụ mụ na ndị nna nna ha gbara n’ụbọchị m seere ha n’aka si n’ala Ijipt kpọpụta ha, ‘bụ́ ọgbụgba ndụ m nke ha onwe ha mebiri, ọ bụ ezie na m bụ di nwe ha,’ ka Jehova kwuru” (Jeremaia 31:31,32).
Ebum n’uche Iwu enyere Israel bụ ịkwado ndị mmadụ maka ọbịbịa nke Mesaịa. Iwu ahụ akụziworo mkpa maka nnwere onwe pụọ n'ọnọdụ mmehie nke mmadụ (nke ụmụ Israel nọchiri anya): "N’ihi ya, dị nnọọ ka mmehie si n’aka otu mmadụ+ bata n’ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile n’ihi na ha niile mehiere —. N’ihi na mmehie dị n’ụwa tupu Iwu ahụ, ma a dịghị agụrụ onye ọ bụla mmehie mgbe iwu na-adịghị” (Ndi Rom 5:12,13). Iwu nke Chineke gosiputara onodu nmehie nke mmadu. O kpughere ọnọdụ nke ihe nile a kpọrọ mmadụ na mmehie: “Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Iwu ahụ ọ̀ bụ mmehie? Tụfịakwa! N’ezie, agaraghị m ama ihe bụ́ mmehie ma a sị na ọ bụghị n’ihi Iwu ahụ; dị ka ihe atụ, agaraghị m ama ihe bụ́ anyaukwu ma a sị na Iwu ahụ ekwughị, sị: “Enwela anyaukwu.” Ma mmehie, bụ́ nke ihe ahụ e nyere n’iwu kpaliri, rụpụtara ụdị anyaukwu niile n’ime m, n’ihi na mgbe iwu na-adịghị, mmehie nwụrụ anwụ. N’eziokwu, o nwere mgbe m dị ndụ mgbe iwu na-adịghị; ma mgbe ihe ahụ e nyere n’iwu bịarutere, mmehie dịrị ndụ ọzọ, ma m nwụrụ. Ihe ahụ e nyere n’iwu nke na-enye ndụ, ọ bụ ya ka m matara na ọ na-eweta ọnwụ. N’ihi na mmehie, bụ́ nke ihe ahụ e nyere n’iwu kpaliri, rafuru m ma gbuo m site na ya. N’ihi ya, Iwu ahụ dị nsọ, ihe ahụ e nyere n’iwu dịkwa nsọ, ziekwa ezi ma dị mma" (Ndị Rom 7:7-12). Ya mere iwu ahụ bụ onye nkuzi na-eduga na Kraịst: "N’ihi ya, Iwu ahụ aghọwo onye nduzi anyị nke na-eduru anyị gakwuru Kraịst, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume n’ihi okwukwe. Ma ebe ọ bụ na okwukwe ahụ abịala, anyị anọkwaghị n’okpuru onye nduzi” (Ndị Galeshia 3:24,25). Iwu zuru oke nke Chineke, n’inye kọwaa mmehie site na njehie nke mmadụ, gosipụtara mkpa nke ịchụ aja nke na-eduga na mgbapụta mmadụ n’ihi okwukwe ya (ọ bụghị ọrụ nke iwu). Àjà a bụ nke Kraịst: "Dị nnọọ ka Nwa nke mmadụ bịara, ọ bụghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, ka o nyekwa mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ" (Matiu 20:28).
Na agbanyeghi na Kraist bu njedebe nke iwu, ihe a bu ezie na ugbua iwu ka n’enwe uru ibu amuma nke n’eme ka anyi mata echiche Chukwu (site na Jisos Kraist) banyere n'ọdịnihu: “N’ihi na ebe Iwu ahụ nwere onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa, ma ọ bụghị ihe ndị ahụ kpọmkwem” (Ndi Hibru 10: 1, 1 Ndi K] rint 2:16). Ọ bụ Jizọs Kraịst ga-eme ka “ezi ihe” ndị a bụrụ ihe eziokwu: “n’ihi na ihe ndị ahụ bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, ma ihe bụ́ ezie dịịrị Kraịst” (Ndị Kọlọsi 2:17).
4 - Ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị n'etiti Chineke na Israel nke Chineke
"Ndị niile ga-eje ije n’ụzọ kwesịrị ekwesị site n’ụkpụrụ omume a, ka udo na ebere dịkwasị ha, dịkwasịkwa Izrel nke Chineke"
(Ndị Galeshia 6: 16)
Jizọs Kraịst bụ onye ogbugbo n’ọgbụgba ndụ ọhụrụ: “N’ihi na e nwere otu Chineke, na otu onye ogbugbo n’etiti Chineke na mmadụ, onye bụ́ mmadụ, ya bụ, Kraịst Jizọs” (1 Timoti 2:5). Ọgbụgba ndụ ọhụrụ a mezuru amụma Jeremaịa 31:31,32. 1 Timoti 2:5 na-ezo aka na mmadụ niile kwenyere n'àjà Kraịst (Jọn 3:16). “Israel nke Chineke” nọchiri anya ọgbakọ Ndị Kraịst dum. Ka o sina dị, Jizọs Kraịst gosipụtara na “Israel nke Chineke” a ga-anọ n’eluigwe ma n’ụwa.
""Israel nke Chineke" nke Eluigwe, bụ Jerusalem Ọhụrụ, isi obodo nke ga-abụ ikike nke Chineke, ga - esite n’eluigwe, n’elu ụwa (Nkpughe 7: 3-8, Israel nke ime mmụọ nke ebo iri na abụọ mejupụtara nke 12000 = 144000): “Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem Ọhụrụ, ka o si n’eluigwe, n’ebe Chineke nọ, na-agbadata. A kwadebekwara ya dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ nke a chọrọ mma maka di ya” (Nkpughe 21:2).
“Israel nke Chineke” nke ụwa ga-abụ ụmụ mmadụ ndị ga-ebi na paradaịs elu ala n’ọdịnihu, ndị Jizọs Kraịst họpụtara dị ka ebo iri na abụọ nke Izrel ga-ekpe ikpe: “Jizọs sịrị ha: “N’ezie, ana m asị unu, Mgbe a ga-eme ka ihe dị ọhụrụ, mgbe Nwa nke mmadụ ga-anọdụ ala n’ocheeze ya dị ebube, unu onwe unu ndị sowooro m ga-anọdụkwa ala n’ocheeze iri na abụọ, na-ekpe ebo iri na abụọ nke Izrel ikpe" (Matthew 19:28). A kọwara Israel nke ime mmụọ n’elu ụwa a n'amụma nke Ezikiel isi 40-48.
(A ga-enwe oke igwe mmadụ ndị ga - alanarị mkpagbu ahụ, nke ga - anọchi anya otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ dị ugbu a dịka amụma ndị dị na Zekaraya 13: 8 na Mkpughe 7: 9-17)
(A ga-enwe mbilite n ’ụwa)
(A ga-ekpe ndị ajọ omume ikpe)
Ugbua, Israel nke Chineke mejupụtara bụ Ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi, ndị nwere olile anya nke eluigwe na Ndị Kraịst nwere olileanya n’elu ụwa (Nkpughe 7:9-17).
('Israel a nke Chineke' 'bụ ọgbakọ ndị Kraịst nke na-efe Jehova ofufe ma na-ejere Eze Jizọs Kraịst ozi)
N'uhuruchi nke mmemme ngabiga ikpeazụ, Jesus Christ ama anam emana ediomi obufa ediomi emi ye mme anam-akpanikọ apostle oro ẹkedude ye enye: “O wee were otu ogbe achịcha, kelee Chineke, nyawaa ya, ma were ya nye ha, sị: “Nke a pụtara ahụ́ m nke a gaje inye n’ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m.” O bukwaara iko ahụ n’otu ụzọ ahụ mgbe ha risịrị nri anyasị, sị: “Iko a pụtara ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ nke dabeere n’ọbara m, bụ́ nke a gaje ịwụpụ n’ihi unu” (Luk 22:19,20).
Ọgbụgba ndụ ọhụrụ a gbasara Ndị Kraịst niile kwesịrị ntụkwasị obi, n'agbanyeghị “olileanya” ha (nke eluigwe ma ọ bụ nke ụwa). Ọgbụgba ndụ ọhụrụ a bụ na mmekọrita ibi úgwù ime mmụọ nke obi (Ndị Rom 2: 25-29). Dika onye Kristian kwesiri ntukwasi obi nwere “ibi úgwù ime mmụọ nke obi”, opuru iri nri achicha ahu koro eko, ma drinku iko ahu nke negosi ọbara nke ogbugba ndu ohu (ihe obula olile anya ya (nke elu igwe ma obu nke uwa)): "Ka mmadụ buru ụzọ nwapụta onwe ya mgbe o nyochasịrị onwe ya, mgbe o mere otú ahụ, ya taa achịcha ahụ ma ṅụọ iko ahụ" (1 Ndị Kọrịnt 11:28).
5 - Ọgbụgba ndụ maka Alaeze: n'etiti Jehova na Jizọs Kraịst na n'etiti Jizọs Kraịst na 144,000
"Otú ọ dị, ọ bụ unu rapaara m n’ahụ́ n’ọnwụnwa m dị iche iche; mụ na unu na-agbakwa ndụ maka alaeze, dị nnọọ ka mụ na Nna m gbara ndụ, ka unu wee rie ma ṅụọ na tebụl m n’alaeze m, nọdụkwa ala n’ocheeze ikpe ebo iri na abụọ nke Izrel ikpe”
Emere ọgbụgba ndụ a n’otu abalị ahụ Jizọs Kraịst mere ememme ọmụmụ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Ọgbụgba abụọ a adịghị otu. Ọgbụgba ndụ maka alaeze dị n'etiti Jehova na Jizọs Kraịst na n'etiti Jizọs Kraịst na 144,000 ndị ga-achị n'eluigwe dị ka ndị eze na ndị nchụàjà (Mkpughe 5:10; 7: 3-8; 14: 1- 1) 5).
Ọgbụgba ndụ nke alaeze nke dị n'etiti Chineke na Kraịst bụ ọgbụgba ndụ nke Chineke, ya na Eze Devid na usoro ndị eze. Ọgbụgba ndụ a bụ nkwa Chineke maka ndụ ebighị ebi nke usoro ọmụmụ Devid. Jizọs Kraịst bụ n’otu oge ahụ, nwa nke Eze Devid, n’elu ụwa, na eze nke Jehova họpụtara (na 1914), na mmezu ọgbụgba ndụ maka otu Alaeze (2 Samuel 7: 12-16; Matiu 1: 1–16, Luk 3: 23–38, Abụọma 2).
Ọgbụgba ndụ maka alaeze a ga-eme n'etiti Jizọs Kraịst na ndịozi ya, na mgbakwunye, ya na ọnụ ọgụgụ nke ndị dị otu narị puku na puku iri anọ na puku, n’ezie, nkwa alụmdi na nwunye nke eluigwe, tutu akwa ukụt: “Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, nweekwa obi ụtọ nke ukwuu, ka anyị nyekwa ya otuto, n’ihi na ọlụlụ nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ eruwo, nwunye ya ejikerewokwa. Ee, e nyewo ya ikike iyiri ákwà linin ọma nke na-enwu gbaa, nke dịkwa ọcha, n’ihi na ákwà linin ọma ahụ nọchiri anya ezi omume nke ndị nsọ na-eme” (Nkpughe 19:7,8). Abụ Ọma nke 45 na-akọwa amụma nke alụm di na nwunye nke a dị n'etiti Eze Jisọs Kraịst na nwunye eze, New Jerusalem (Nkpughe 21:2).
Site na alum di na nwunye a, agam amu umu nke ala eze ahu, ndi isi n’uwa ga abu ndi nnochi anya ala nke ikike nke ala eze Chineke: “Ụmụ gị ndị ikom ga-anọchi nna nna gị hà, Ị ga-ahọpụta ha ịbụ ndị isi n’ụwa dum" (Abụ Ọma 45:16, Aịsaịa 32: 1,2).
(Amụma Ezikiel isi 40 ruo 48 kwuru ọrụ nke ndị isi ga-achị n'ụwa n'ọdịnihu)
(Amụma nke Ezikiel isi 40 ruo 48, na-arụkwa ọrụ nke ndị nchụàjà n'ọdịnihu n'ụwa)
Ngọzi ebighebi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ na ọgbụgba ndụ maka Alaeze, ga-emezu ọgbụgba ndụ Abraham nke ga-agọzi mba niile, na ruo mgbe niile ebighị ebi. A ga-emezu nkwa nke Chineke nke ọma: "nke dabeere n’olileanya ndụ ebighị ebi, nke Chineke, onye na-apụghị ịgha ụgha, kwere nkwa ya tupu mgbe dị anya gara aga" (Taịtọs 1:2).
(Ngozi nile nke nnwere)
(Ngozi nile nke nbilite nonwu nke igwe)
(Ngọzi nke mbilite n'ọnwụ n'ụwa)
(Ngozi nile nke uwa nke ala eze Chineke)